Daldaltoonni saatiin hojii 3- 10 qofaa akka ta'uuf gaafatan - BBC News Afaan Oromoo
Daldaltoonni saatiin hojii 3- 10 qofaa akka ta'uuf gaafatan
Daldaltoonni magaalaa UK fi biyyoonni Awurooppaa sa'aatii hojiin daldalaa itti gaggeeffamu hirrisuun haala jireenyaa ammaa akka deegaraniif gaafatan.
Isaanis hojiin daldalaa ganama keessaa sa'aatii sadiirratti eegaluun sa'aa 10 irratti akka cufamuuf gaafatan.
Saatiin daldalaa gabaabbachuun ammoo daldaltootarraa dhiibbaa hirrisuun, hojjattoota gosa garaa garaa gara damee kanaatti hawwachuu danda'a jedhu.
Daldalli gabaa sheerii aadaadhaan irra caalaa dhiirootaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, hanga harraattis gaheewwan tajaajila faayinaansii gara biraarratti dubartoota hawwchuuf hanqinni jiraa jedha, waldaan tokko.
''Dubartiin doqdoqqee ooftu daa'ima godhachuu dandeessii?'' naan jedhan
Itti-gaafatamtuun Walqixummaa Waldaa Gabaawwan Faayinaansii biyya Awuurooppaa (AFME), April Day akka jettuutti dhaabbanni ishee dhaabbilee daldalaa Landan, Paariis, Jarmaniifi Naannoo Noordik waliin waliin dubbachuun saatiin daldalaa akka hirratuuf waamicha taasisaa jiru.
Gaaffiin kunis waldaalee invastimantii qaama daldalaa ta'an waliin ta'uun.
Yeroo baayyee daldaltoonni saatii gadaanaafi ykn sa'aatii 8.5 ta'uuf hojjatu, jetti Ms Day.
Fakkenyaafis, US'tti daldalli saatii jahaafi wallakkaaf banaa yoo ta'an, gabaan Eshiiyaa ammoo saatii 6f banaadha.
''Hojii gabaabaan ammoo hojjattootaaf haala mijataa umuusaatiin alatti, namooti garaa garaa gara damee daldalaa keessatti hirmaatanii ni hawwata,'' jetti Day.
Fakkeenyaa, darbiiwwan daldalaa baayyinaan dubartoota hawwachuu qabaatu jetti. ''Daldalli dhiirootaan kan guutameedha yoo jedhame soba hin ta'u.''
Daldalli sheerii Landaniis gaaffii kanarratti marii akka eegalu himeera.
Rakkiin daa'ima kunuunsu
Dubartoonni sadarkaa daldalaa gadaanaarratti hirmaatan xiqqoodha jechuun, hirmaannaan dubartoonni sadarkaa hooggansa invastimantiifi daldala baankii irratti qaban gadaanaadha, jetti Day.
Itti-gaafatamummaan kunuunsa daa'imaafi hojii dhiiraafi dubartootaayyuu rakkina jetti.
''Ganama saatii 11 irratti jiddugala kunuunsa daa'imaa argachuun baayyee rakkisaadha'' jetti.
Saatii dheeraadhaaf hojiiwwan daldalaa dhiphiin qabuu irratti dabarsuun daldaltoonni rakkina fayyaa sammuutiif akka saaxilamaniif gumaata taasisa, akka Ms Day jettutti.
Gaalinaa Dimitrovaa, Waldaa Invastimantiitti Daareektarri gabaawwanii: ''Seenaawwan rakkina fayyaa sammuu daldaltootaa baayyee gaddisiisoo ta'aniifi dhiibbaa jireenya dhuunfaa sababii hojiin sa'aatii dheeraatiin qaqabe baayyee dhageenyeera.''
Kanaafuu, xinxalli Awurooppaanooti ballaan gaggeessaniin haalli kun geedaramee gabaan baayyee bu'a qabeessaafi kanneen keessa hojjataniif mijatu akka uumamu abdii qabaachus ni himu.
Daldalalli Sheerii Landoon fooyya'iinsa heddumina hammatuufi aadaa lafa hojii magaalattii cimse kan deeggaru ta'uu himeera.
Waammichi waldaalee daldalaatiif taasifameen, ''yaada barbaachisaa jijjirama saatii daldalaa Awurroopaa guutuuf dhiyaate,'' jedhaniiru.
''Gaaffii dhiyaate kanas haala idileetiin daldala gabaa adunyaa Landaniifi maamiltoota waliin taasisuuf feeneerra,'' jedhan.
Dagaaginni roobootii hojjettootaaf hiika maalii qaba?
Yaa'ii Afriikaa fi Raashiyaa: Fedhiin Raashiyaan Ardii Afriikaa irraa qabdu maali?